Ukwakheka kanye ngezigaba ngokhonkolo imishini kuhlangana - China Shandong QianBaidu
Ukwakheka kanye ngezigaba ngokhonkolo imishini kuhlangana
Ukwakheka ngokhonkolo kuhlangana isitshalo
Ukhonkolo kudivayisi kuhlangana kuyinto usimende, aggregate, amanzi, admixture, admixture nezinye izinto ngokuhambisana nezidingo ukhonkolo isilinganiso nesilinganiso, futhi wabe esegqugquzela ibe ukhonkolo mixer iqoqo imishini, eyaziwa njengoba ukhonkolo kuhlangana isitshalo (phansi). Ukhonkolo kudivayisi kuhlangana ngokuyinhloko imishini impahla yokusingatha, imishini izinto isitoreji, imishini yokukala, ukuxuba imishini nokulawula izinhlelo kanye nezinye izingxenye. Kubandakanya izinto, aggregate, usimende, admixture, amanzi, izithasiselo nokunye.
Ukwahlukanisa ukhonkolo imishini kuhlangana
(A) by ukuhamba ngezigaba
1. Ucingo kuhlangana esiteshini
Kulesi siteshi kuhlangana ngokuvamile nedivaysi ukuhamba, angadluliselwa nganoma yisiphi isikhathi, ukuhamba kuhle. Ikakhulu ingashintshwa ukuze abanye amaphrojekthi yesikhashana noma mobile kakhulu, ezifana imigwaqo, amabhuloho, nokunye.
2. Demolition of esiteshini ukuxuba
Lesi simila kuhlangana libuthene kusukela izingxenye eziningana ezinkulu, kungenziwa zesikole zezikhali ngesikhathi esifushane, nokudluliselwa esakhiweni. Ikakhulu elisetshenziswa commercial ukhonkolo izimboni kanye ezinkulu kanye naphakathi ukwakhiwa ukhonkolo.
3. Fixed ukuxuba phansi
Lena esikhulu ukhonkolo kuhlangana isitshalo nge obunamandla ukukhiqizwa, ikakhulukazi elisetshenziswa commercial ukhonkolo izimboni, ezinkulu isitshalo prefabricated namanzi Conservancy kwakhiwa.
(B) ngokuvumelana nenqubo ukukhiqizwa ngezigaba
Ukhonkolo kudivayisi kuhlangana ngokuvumelana kusakhiwo ubuchwepheshe yayo zingahlukaniswa zibe owodwa esigabeni futhi kabili esiteji izigaba ezimbili.
(C) ezinye izindlela ngezigaba
Ukhonkolo kuhlangana divayisi kwalokhu okungenhla ezimbili izinhlobo izindlela evame ukusetshenziswa of ngezigaba, kodwa futhi ngokuvumelana ukuthi ukucushwa kwe ukuxuba imishini bese wengeza amanzi ukuxuba ku ezomile batching impahla esiteshini ezimanzi kuhlangana esiteshini, ngokuvumelana ulungiselele yokudla esiqhubekayo imishini ukuxuba ihlukaniswe okuqhubekayo kuhlangana esiteshini futhi Gap kuhlangana esiteshini.
isikhathi Iposi: Feb-08-2018